शरीरको आन्तरिक उर्जा कसरी बढाउने ? - Everest Dainik - News from Nepal
शरीरको आन्तरिक उर्जा कसरी बढाउने ?
काठमाडौं । कुनै पनि मानिसमा आन्तरिक शक्ति कम भएपछि उसले गर्ने हरेक किसिमको काममा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्छ । आन्तरिक शक्तिको अर्थ यो हो कि हाम्रो शरीर भित्रको उर्जा या शारीरिक बल । सामान्य शब्दमा भन्नुपर्दा अँग्रेजी शब्दमा स्टामिना अर्थात् आन्तरिक शक्तिले व्यक्तिद्वारा कुनैपनि काम गर्नको लागि राख्ने शारीरिक एवं मानसिक तागतलाई जनाउँछ ।
– थोरै हिँड्दा वा एक-दुई सिँढी चढ्दा पनि थकाई लागेको महशुस हुनु ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाभाइरसः सङ्क्रमण भएपछि यसले मानिसको शरीरमा के गर्छ?
कार्बोहाईड्रेटको कमी – धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ कि कार्बोहाईड्रेडको सेवनले नै शरीरलाई सबैभन्दा धेरै शक्ति दिने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो खानामा कार्बोहाईड्रेडको मात्रा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक शक्ति बढाउनको लागि के-के खाने ?
१, दूध र मह – शरीरमा आन्तरिक शक्तिको लागि दूध र मह अति आवश्यक पौष्टिक तत्व हो । दैनिक एक गिलास दूधमा २ चम्चा मह राखेर खाने हो भने यसले शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन, मिनेरल्स र कार्बोहाईड्रेड प्रदान गर्ने गर्दछ ।
२ . नरिवलको पानी – नरिवलको पानी मानिसको लागि अमृत समान हुन्छ । किनकी यसमा भरपुर मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट, मिनेरल्स र भिटामिन जस्ता तत्वहरु पाउने गरिन्छ । जुन हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न एवं शरीरमा आन्तरिक शक्तिलाई मजबुत बनाउनको लागि समेत विशेष महत्व राख्ने गर्दछ । हरेक दिन उठेर खाली पेटमा नरिवलको पानी खानाले शरीरमा भरपुर उर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ ।
यस बाहेक पनि पालकको साग, चनाको साथमा शख्खर या किसमिस, नियमित पानी पिउनु पनि शरीरमा आन्तरिक शक्तिको लागि आवश्यक कुरा हो । यसबाहेक फल र हरियो तरकारीले पनि शरीरको विकासमा ध्यान दिने गर्दछ । हरियो तरकारीमा भिटामिन, मिनेरल्सहरु पर्याप्त मात्रामा पाउने गरिन्छ । यस विपरित स्याउ, अनार, केरा, फल आदि हुने गरेको छ । त्यस्तै, बियर, अण्डा आदि पनि शरीरको विकासको लागि आवश्यक खाद्य बस्तु हो । अनलाइन खबरबाट
ट्याग्स: आन्तरिक उर्जा, शरीर